Fighting U Kyaw Thu! Fighting Tun Ko Ko! ဟု သူတို့ရဲ့ PPE ဝတ်စုံတွေပေါ်မှာ ရေးထိုးပြီး အားပေး ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်များ – Let Pan Daily
Fighting U Kyaw Thu! Fighting Tun Ko Ko! ဟု သူတို့ရဲ့ PPE ဝတ်စုံတွေပေါ်မှာ ရေးထိုးပြီး အားပေး ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်များ
Let Pan | October 25, 2020 | Celebrity | No Comments
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဦးကျော်သူနဲ့ထွန်းကိုကိုတို့ကတော့ ဝေဘာဂီဆေးရုံကြီးမှာ တက်ရောက်ကုသနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကုသပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်က ပရဟိတသမားကြီးတွေကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပံ့ပိုးပေးနေပြီး
ဆေး၊ကုထုံး၊ကြင်နာ၊စေတနာ၊မေတ္တာ၊ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်တို့ပြင် သူတို့ဝ တ်ဆင်ထားတဲ့ PPE ဝတ်စုံတွေပေါ်မှာ “Fighting U Kyaw Thu” “Fighting Tun Ko Ko”ဟုသူတို့ရဲ့ PPE ဝတ်စုံတွေပေါ်မှာ သူတို့ရဲ့ နာမည်တွေကိုပါ ရေးထိုးပြီး အားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဆေးဝါးကို အကောင်းဆုံးကုသပေးနေတဲ့အပြင် ခုလိုရေးထိုးကာ အားပေး စကားများ ပြောကြားခြင်းသည်လည်း လူနာများအတွက် အထူးခံနိုင်ရည်အင်အားများကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ကုထုံးများဖြစ်ပါတော့သည်။
Writer>> TH(Fb Daily News)/Kyaw Thu
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ဦးေက်ာ္သူနဲ႔ထြန္းကိုကိုတို႔ကေတာ့ ေဝဘာဂီေဆး႐ုံႀကီးမွာ တက္ေရာက္ကုသေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ ကုသေပးေနတဲ့ ဆရာဝန္ႀကီးေတြကိုယ္တိုင္က ပရဟိတသမားႀကီးေတြကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ပံ့ပိုးေပးေနၿပီး
ေဆး၊ကုထုံး၊ၾကင္နာ၊ေစတနာ၊ေမတၱာ၊ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္တို႔ျပင္ သူတို႔ဝ တ္ဆင္ထားတဲ့ PPE ဝတ္စုံေတြေပၚမွာ “Fighting U Kyaw Thu” “Fighting Tun Ko Ko”ဟုသူတို႔ရဲ႕ PPE ဝတ္စုံေတြေပၚမွာ သူတို႔ရဲ႕ နာမည္ေတြကိုပါ ေရးထိုးၿပီး အားေပးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
ေဆးဝါးကို အေကာင္းဆုံးကုသေပးေနတဲ့အျပင္ ခုလိုေရးထိုးကာ အားေပး စကားမ်ား ေျပာၾကားျခင္းသည္လည္း လူနာမ်ားအတြက္ အထူးခံႏိုင္ရည္အင္အားမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ကုထုံးမ်ားျဖစ္ပါေတာ့သည္။
ညှို့အားပြင်းတဲ့ ကိုယ်လုံး အလှတရားတွေကို ရိုက်ကူး ထားတဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ ရဲ့ ပုံရိပ်များ
ရင်ဖိုစရာကောင်းလောက်အောင် ဆက်ဆီကျလွန်းနေတဲ့ မေရတီဇော်
အလန်းစား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှပေါ်လွင်နေတဲ့ မေဘရဏီစံ